Buy 11-ketotestosterone powder (564-35-2) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Serasera testosterone volo / 11-Ketotestosterone vovoka
SKU: 564-35-2. Sokajy: Serasera testosterone volo, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny 11-ketotestosterone poids (564-35-2), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
11-ketotestosterone vovoka dia mitovitovy amin'ny testosterone hormonina fa fiompiana voajanahary toy ny orgasme voalohany amin'ny trondro. Ampahany betsaka amin'ny fanjakan'ny biby sy ny fanohanana sakafo izy io. Tsy niova ho estrogeneven raha toa ka manana asa anabolika mahomby izy ....
11-Ketotestosterone volo video
11-ketotestosterone vovoka ireo karazana fototra
Name: 11-ketotestosterone vovoka
11-ketotestosterone vovoka amin'ny tsingerin'ny fitsaboana homamiadana
Brand Names: Poids 11-Ketotestosterone
Generic Name: 11-Ketotestosterone vinaingitra vidy, 564-35-2
11-Ketotestosterone fampiasana vovoka
Ny kofona 11-ketotestosterone (CAS 564-35-2) dia miasa amin'ny lafiny roa samihafa amin'ny fotoana iray mba hamerenana ny tahan'ny voankazo matromatika ary mametraka ny vatana ho lasa anabolika. Izany dia fitambarana anabolika voajanahary izay hita amin'ny habetsaky ny fitiliana amin'ny olona ho metabolita amin'ny hormones adrenalin'olom-bolo ary koa ny androgen voalohany amin'ny trondro izay mahatonga azy ho eo amin'ny fanomezana sakafo. Mavitrika tsy misy fiovàna izy, tsy afaka ny aromina, ary mavesa-danja toy ny testosterone, manetsika ny receptor androgen. Izany dia mampihena ny haavon'ny kortisol amin'ny olana matavy sy ao amin'ny aty satria io dia singa mahery sy mifantoka amin'ny fihenam-bidy ataon'ny 11β-HSD1. Ny habetsaky ny cortisol ao anatin'ireny vatomamy ireny dia mifandray amin'ny soritr'aretin'ny metabolika, toy ny fitomboan'ny famokarana glucose, ny fahasamihafana eo amin'ny adipocyte, ny fidiram-bolany ary ny fanoherana ny insuline. Manampy amin'ny fifehezana izany ary manampy amin'ny fahavoazana matavy rehefa mitazona tanjaka sy hozatra. Izy io dia mifanaraka amin'ny maha-"recomp" agent ho an'ny fatiantoka mavesatra sy ny hozatra ary ny fahazoana tanjaka. Izany dia tonga lafatra ho an'ny mpandidy sy mpandanto baolina za-draharaha ary koa tsara indrindra amin'ny famoahana ny cycles. Ny KT-11 dia afaka manampy amin'ny taolam-panafody vaovao iray ary handoro ny dite mihoatra ny vitany mba hahatonga ny hozatra ho matevina amin'ny endriny tonga lafatra sy madio.
Ny fomba fiasa 11-ketotestosterone dia miasa
Ny poezia 11-Ketotestosterone toy ny androgen potika dia novokarin'ny trondro lahy ankoatra ny testosteron. Tamin'ny fanandramana teo aloha dia nisy tovovavy maromaro (Clarias gariepinus) izay nampiseho fa tsy testosterone fa ny poezia 11-Ketotestosterone dia nanentana spermatogenese. Ny Testosterone kosa etsy ankilany, ny fampivoarana ny gonadotroph ny gonadotroph.
Ny tsipirian'ny 11-Ketotestosterone dia tsy fantatra amin'ny olona. Ny fanamafisana ny famokarana sy ny fananana amin'ny poeta 11-Ketotestosterone amin'ny olona no tena tanjon'ity fianarana ity. Ny gonady olombelona dia nodinihina tamin'ny fanehoana ny karazam-borona sy ny 450beta-hydroxysteroid cytochrome 11 sy 1 izay endriky ny endriny manan-danja amin'ny fampidirana ny vovony 2-Ketotestosterone. Ny famokarana vovoka 11-Ketotestosterone dia nodinihina tao amin'ny cellule Leydig. Avy amin'ny vehivavy 11 sy 10 lehilahy taonan'ny fiterahana, dia voatanisa ny lokon-kazon'ny testosterone. Ny sela MCF-10 izay voan'ny kanseran'ny nono dia nampiasaina tamin'ny fanadihadiana ny fananany. Ny vokatra farany dia maneho fa ny vovony 7-Ketotestosterone dia entina amin'ny gonads ary io dia maneho androgen lehibe amin'ny olona ary mety ho toy ny androgen tsy marary.
Ny fandinihana iray hafa dia naneho fa ny haavom-pampandrosoana 11beta-HSD1 dia misy ifandraisany amin'ny herin'ny tebiteby ambany amin'ny lahy antitra. Ny 11-ketotestosterone vovoka dia mpanelingelina ny 11beta-HSD1, 11-KT dia mety hisoroka na hamerina ny fahaverezan'ny herim-po mahery vaika. Ny vokatra dia mampiseho fa amin'ny fampiasana 11-KT, ny mpihazona zokiolona dia afaka mitazona hery na hamerenana ny fahaverezan'ny herim-po noho ny fiovan'ny metabolic taona.
Benefits amin'ny vovoka 11-Ketotestosterone
Ity ingredient dia fantatra amin'ny toetra mahatsiravina matavy. Izany dia tonga lafatra ho an'ny fanombohana sy ireo tra-boina bebe kokoa amin'ny bodibondrano ary koa ny heverina fa tsara indrindra amin'ny famoahana faribolana. Ity zavatra ity dia tsara indrindra ho an'ireo izay maniry matavy ary mahazo tanjaka. Ny vovo-ketotestosterone 11-Ketotestosterone koa dia afaka manampy ireo mpandidy birao hanampy ny taolam-bozaka sasantsasany ary ho amin'ny endrika tsara indrindra azon'izy ireo.
Ny 11-Keto-Testosterone dia tsy steroid ho an'ny tenany manokana fa mety ho fanampiny fanampiny amin'ny famokarana fery izay misy olona tsy matavy ary mampihena ny cortisol. Noho izany, any amin'ny firenena izay ara-dalàna, dia mety Ny singam-pokontany izay manampy ny fitambaran'ny habetsaky ny masomboly amin'ny tsingerin'ny steroids hafa. Tokony ho 200-300mg ny doka mahazatra raha iray tapitrisa isanandro ny transdermal. Mety ho azo ampiasaina amin'ny ester ary ampiasaina amin'ny 400mg isan-kerinandro miaraka amin'ny fanolo ny steroids toy ny Anavar na Masteron.
Dosage amin'ny poeta 11-ketotestosterone (CAS 564-35-2)
Ity vatosoa ity dia tena mafy ho an'ny tenany manokana saingy afaka manampy betsaka koa ny famokarana sikotra izay hanirian'ny olona ny haniny ary hihena ny kortisol. Any amin'ny firenena sasany izay heverina ho ara-dalàna, dia singa tena mendrika izay manampy ny kalitaon'ny ankamaroan'ny olona amin'ny vanim-potoan'ny steroid hafa. Ho an'ny orsa, ny doka dia tokony ho 200-300 mg raha ny antsasak'izany dia ho an'ny transdermal isan'andro. Ho an'ny fampiasana zavatra azo tsapain-tanana, dia tsara indrindra miaraka amin'ny ester ho an'ny dosage amin'ny 400 mg isan-kerinandro miaraka amin'ireo steroïde hafa, Anavar na Masteron ohatra.
Ny voka-dratsin'ny hery 11-ketotestosterone
Koa satria metabolite avy amin'ny testosterone, ny poezia 11-Ketotestosterone dia azo lazaina fa marefo. Tsy afaka mivadika ho estrogen na DHT izy io. Manana profitera be dia be izy io izay mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ireo izay tsy mahatsapa fihenam-bidy izay misy ny fihenan'ny volo sy ny olana ety ivelany. Tsy methylated koa izy io ka izany no mahatonga azy tsy hiteraka adin-tsakafo na tsiranoka na tsiranoka. Ny vovo-ketotestosterone 11-Ketotestosterone dia mora mora amin'ny fitantanana ny tsiranoka momba ny tsimok'aretina, ka mahatonga azy io ho iray amin'ny steroids azo antoka azo ampiasaina.
11-Ketotestosterone vovoka Marketing
Ahoana no hividianana vovoka 11-Ketotestosterone avy any AASraw